Sekuyisikhathi eside inqubo enhle neyothando ivele: ukucela izandla nezinhliziyo zowesifazane, indoda kumele iwase ngamadolo amabili futhi ibonise ibhokisi elinesibopho sokubandakanya. Futhi intombazane evumayo kwakudingeka uyigqoke "kuze kube sekufeni." Kodwa nanamuhla le masiko isibe enye indlela imibhangqwana yokuncintisana ngobuningi nokucabangela, ikakhulukazi phakathi kwezinkanyezi ezinemali eyanele yokuzithenga noma yikuphi noma cishe noma yikuphi ukuhlobisa.
Amadayimani amakhulu nokuhlakazeka kwamafirefidi - indawo ethi Bright Side ikumema ukuba ubabaze kakhulu edume emlandweni futhi uthande izindandatho eziningi zomshado.
Lo mdlali wabizwa udumo ngenxa yokuthi wadlala ingxenye kaRachel ochungechungeni oluthandwayo lwe-TV elithi "Friends". Ngesikhathi evele emphakathini ngezindandatho nge diamond enkulu yezinqola ezingu-8, ekhanyisa ngemuva kwesigqoko segolide. Umklami womkhiqizo - uJennifer Meyer - wathola ama-dollar ayizinkulungwane ezingu-500, kodwa lokhu kungaphezu kwezindleko zezindlu ezithile!
I-stone of 18 carats yayisemunwe we-Queen Bee ngemuva kokuvuma ukuba ngumkaJay Z ngo-2007. Umklami wezimpahla zegolide uJorraine Schwartz wagcwalisa umyalelo we $ 5 million! Ngingayenqaba kanjani?
Umkhwenyana walo mdlali wezeNgisi ohlanzekile, uJohn Krasinski, ngesikhathi sokuxoxisana enikeze indandatho, kulinganiselwa cishe ngamaRandi ayizigidi ezingu-100. Umhlobiso wenziwa nge-platinum futhi uhambisana ne-diamat 3 ye-carat. Ukuncane okuncane kunalokho okudlule, kodwa akukho okumangalisa kakhulu.
Ngo-1953, ukuhlanganyela kukaJohn noJacqueline Kennedy kwenzeka. I-ring yokubandakanya ngedayimane ne-carat emerald emibili ebiza u-$ 1 million ihlelwe emlandweni njengenye yehlukile kunazo zonke. Idizayini yakhiwa nguVan Cliff ne-Arpels.
Mhlawumbe, lena yindandatho yomshado edume kakhulu emhlabeni. Ngaphambili, kwakunguNy Princess Diana, futhi manje uhlobisa isandla sodondolozi lweCambridge Keith. I-sapphiri enkulu ye-carats engu-18 ihlanganiswe yizinhlamvu eziningi negolide elimhlophe. Umhlobiso ulinganiswa kuma-dollar ayizinkulungwane ezingu-500.
Naphezu kokuthi umshado kaMarilyn noJoe DiJo awuzange uhlale isikhathi eside, indandatho yomshado, eyethulwa umdlali we-basketball, yehla emlandweni njengenye yezindleko ezibiza kakhulu. Izindleko zalo mhlobiso zaziyi-772 kanye nengxenye eyizinkulungwane zamaRandi. Umkhiqizo yizinsika ezimbili zeplatinum ezisekela idayimani ezingu-35 zombili izinhlangothi. Ifomu nokuklama okunjalo kuyathandwa futhi kuyadingeka phakathi kwabesifazane abacebile bemfashini esikhathini sethu.
Mhlawumbe wonke amantombazane amaphupho okuba enye yalezi zindandatho. Futhi siyakholelwa ukuthi into ebaluleke kakhulu akuyona umhlobiso noma izindleko zayo, kodwa amandla othando, alinganisiwe nakancane kuma-dollar kanye ne-carats.
Self umqondo izintambo yilezi: ekuhlaziyeni izinhlobo, ikakhulukazi inhlangano kanye nokubuyekeza
Izifo ze-endocrine: izimbangela, nokuvinjelwa, ukuphathwa
I-membrane yeselula nendima yayo yezinto eziphilayo
Kuthiwani uma kwakukhona ukuhluleka Shockwave Flash